Dawlada Denmark Oo Ugu Baaqday Beesha Caalamka In Taageero Deg-deg Ah Loo Fidiyo Horumarka Qadiyada Somaliland | Araweelo News Network (Archive) -
Dawlada Denmark Oo Ugu Baaqday Beesha Caalamka In Taageero Deg-deg Ah Loo Fidiyo Horumarka Qadiyada Somaliland
Copenhagen(ANN)Dawladda Denmark oo ka mid ah dalalka ku yaal qaaradda Yurub, ayaa ka digtay in horumarka muuqda ee Jamhuuriyadda Somaliland ku tallaabsatay uu burburi karo haddii aanay beesha caalamku si dhaqso ah taageero ugu fidin. Sidaa waxa ku dhawaaqay
Wasiirka Horumarinta Denmark Md. Christian Friis Bach, isagoo ku baaqay inay waajib tahay in beesha caalamku taageero u fidiso horumarka dhinaca fiican loo qaaday ee Somaliland, waxaannu tilmaamay in horumarka ka hana-qaaaday Somaliland ay ku lammaan yihiin faqiirnimo la soo dariistay inta badan bulshada.
Waxa kaloo uu Wasiirka Horumarinta ee Denmarka faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha uu qaban doono xafiiska dawladdiisu ka furanayso Jamhuuriyadda Somaliland, waxaannu yidhi; “Xafiiska aannu Somaliland ka furanayno oo yeelan doona shaqaale joogta ah iyo laba khabiir oo la-taliyeyaal ah waxa uu ka shaqayn doonaa arrimaha ammaanka, caafimaadka iyo dedaalka lagu kobcinayo waxbarashada, annagoo la kaashan doona dawladaha hoose ee la doortay.”
Wasiirka Horumarinta ee Denmark Md. Christian Friis Bach, waxa uu laba toddobaad ka hor booqasho ku yimi dalka Somaliland, isagoo kulamo la yeeshay Madaxweyne Siilaanyo iyo masuuliyiinta kale ee qaranka, kuwaas oo ay ka wadahadleen arrimo la xidhiidha sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya labada dal ee Somaliland iyo Denmark. Iyadoo booqashadiisu daba socotay booqasho uu Somaliland ku tegey Nov, 2010, Mr. Soren Pind oo ahaa Wasiirkii hore ee Iskaashigga horumarinta caalamiga ah ee dawladda Denmark , kaas oo waqtigaa balanqaaday inay Somaliland ka caawinayaan dhinacyada la dagaalanka Agagixisada iyo Budhacd-badeeda.